ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဉီးကျော်မိုးထွန်း (၇၅) ကြိမ်မြောက် ကု… – PVTV Myanmar
·4months ago ·25 Comments
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဉီးကျော်မိုးထွန်း (၇၅) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ ပိတ်ပွဲ နှင့် (၇၆) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ ဖွင့်ပွဲ အစည်းအဝေး များသို့ တက်ရောက်
(၇၅)ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၊ ပိတ်ပွဲအစည်းအဝေးကို ယနေ့၊ ၁၄-၉၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ (၃)နာရီအချိန်၌ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစည်း အဝေး ၌ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. António Guterres မှ မိန့်ခွန်းပြောကြား ခဲ့ပြီး၊ (၇၅) ကြိမ်မြောက် အထွေထွေညီလာခံ၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ H.E. Mr. Volkan Bozkir မှ နှုတ်ဆက်မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်၊ (၇၆)ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန် ရွေးချယ်ခြင်း ခံထားရသည့် H.E. Mr. Abdulla Shahid မှ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့သည်။
ထို့နောက် (၇၆)ကြိမ်မြောက်၊ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ ပထမအကြိမ် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး ကို ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာ၊ အစည်းအဝေးကို (၇၆)ကြိမ်မြောက် အထွေထွေညီလာခံဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Abdulla Shahid မှ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်၊ အထွေထွေညီလာခံ၏ အရည်အချင်းစစ် ကော်မတီ (Credentials Committee) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကို ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ အရည်အချင်းစစ် ကော်မတီ တွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအဖြစ် ဘဟားမားစ်၊ ဘူတန်၊ ချီလီ၊ တရုတ်၊ ရုရှား၊ ဆီရာလွန်၊ နမီးဘီးယား၊ ဆွီဒင်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တို့ပါဝင်သည်။
စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊
Ambassador Kyaw Moe Tun participates in the closing session of the 75th Session and opening session of the 76th Session of the United Nations General Assembly
The closing session of the seventy-fifth United Nations General Assembly was held at General Assembly Hall of the United Nations at 3:00 p.m. on 14 September 2021. At the meeting, Secretary-General of the United Nations H.E. Mr. António Guterres gaveastatement and President of the seventy-fifth UN General Assembly H.E. Mr. Volkan Bozkir also gave his farewell statement. Then, President-elect of the seventy-sixth session of the United Nations H.E. Mr. Abdulla Shahid took the oath of office.
The 1st plenary meeting of the seventy-sixth session of the General Assembly was held following the closing of the seventy-fifth session. The 1st plenary meeting was opened by the President of the General Assembly H.E. Mr. Abdulla Shahid following the appointment of the members of the Credentials Committee. The9member Credentials Committee was formed consisting of the Bahamas, Bhutan, Chile, China, Russia, Sierra Leone, South Africa, Sweden and the United States.
Ambassador Kyaw Moe Tun, Permanent Representative of Myanmar to the United Nations participated in the closing session of the 75th United Nations General Assembly and the opening and first plenary meeting of the 76th Session of the United Nations General Assembly.
Like – 21K Share – 576
Ko Han Lay says:
2021-09-15 at 8:48 AM
UN ကိုယ်စလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်းကို ထောက်ခံပါတယ်
Shine Pho Ta says:
အရည်ချင်းစစ်အဖွဲ့ကို ကြည့်ရတာ တို့ပြည်သူတွေ ကိုထောက်ခံတဲ့ အင်အား သိပ်မတွေ့ရတာ အဆင်မပြေတော့ဘူး
2021-09-15 at 8:55 AM
Thank you very much. We support and stand with National Unity Government (NUG) and Mr Kyaw Moe Tun
2021-09-15 at 8:57 AM
မြန်မာ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း ကျမ်းမာပါစေ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်
2021-09-15 at 8:58 AM
ပြည်သူ့ဘက်တော်သား သံအမတ်ကြီး ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ။ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပါစေ။
War War Win says:
2021-09-15 at 9:18 AM
Thank you very much. We support and stand with National Unity Government (NUG) Congratulations.
Aye AyeToe says:
2021-09-15 at 9:34 AM
Peter Ba Sann says:
ပြည်သူကချစ်သော၊ပြည်သူကိုချစ်သော သံအမတ်ကြီး ဘေးကင်းအောင်မြင်ပါစေ
Chit Tha Mee says:
2021-09-15 at 10:42 AM
2021-09-15 at 11:15 AM
Our Myanmar UN Envoy is U Kyaw Moe Tun. Respectfully U Kyaw Moe Tun.
2021-09-15 at 11:31 AM
2021-09-15 at 11:48 AM
WM Khine says:
Thank you very much. We support and stand with CROH, National Unity Government (NUG) and Mr Kyaw Moe Tun.
Mai Win says:
2021-09-15 at 12:41 PM
ေလညာရပ္က အခ်စ္ says:
Saw Nay Soe says:
2021-09-15 at 2:30 PM
we’re proud of u kyaw moe tun to be represent our myanmar un Envoy
2021-09-15 at 3:49 PM
2021-09-15 at 4:06 PM
သဲ သဲ says:
သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း ရှင့်
ကျက်သရေ မဂ်လာအပေါင်း နှင့် ပြည်စုံ ပါတယ်ရှင့်၊။ ဓမ္မ ရဲ့ ဘက်တော်သားရဲ့ အစပထမ အောင်မြင်မှု့ကို စွတ်ခူး နှိုင်ခြင်း အတွက် ဂုဏ်ယူလေးစားပါတယ်ရှင့်
Kyawt Kyawt San says:
2021-09-15 at 4:36 PM
ဝမ္း သာ ဂုဏ္ ယူ ပါ ၏
2021-09-15 at 6:26 PM
2021-09-15 at 9:52 PM
UN မှာ အစိုးရ အသိအမှတ် ပြုရေး အဓိက အချက်ကြီး ၃ ချက်နဲ့ စဉ်းစားလေ့ရှိတယ်
💥၁_ ပြည်သူက လိုလိုလားလား တင်မြောက်ထားတဲ့ အစိုးရ ဖြစ်ရမယ်
💥၂_ ကမ္ဘာက ချမှတ်ထားတဲ့ ဥပဒေ နဲ့ ပြည်တွင်း ဥပဒေတွေကို လေးစား လိုက်နာတဲ့ အစိုးရ ဖြစ်ရမယ်
💥၃_ နယ်‌မြေ စိုးမိုးထိမ်းချုပ်မှုလည်း ရှိရမယ်
NUG မှာ ၁_ ၂ အချက်တွေပဲ ပြည့်စုံနေပြီး ၃_အချက် နယ်မြေ ထိမ်းချုပ်မှု လိုအပ်နေတယ်
နံပါတ် ၂ အချက်ကိုလည်း စကစ က အောက်လုံးထိုးပြီး နာမည် ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားလာနေတယ်
~စကစဟာ နယ်မြေစိုးမိုးထိမ်းချုပ်ထားတယ်ဆိုပေမယ့် လူထုအသိအမှတ်လည်း မပြု ဥပဒေလည်း မလိုက်နာတဲ့ အချက်က အားနည်းနေတယ်
ဒို့ NUG အနေနဲ့ နယ်မြေ စိုးမိုးမှု ရယူနိုင်မှ သာလျင် မိမိတို့ လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရမှာဖြစ်ပါတယ်